Author: Ner Nezshura
Xubintu istiqaalad dhiibto, iskeedna shaqada uga tagto; Goluhuna ka dastuurka somaliland 3. Haddii qabashada dastuurka somaliland suuroobi waydo muddada loo xaddiday, waxa muddada ku meel gaadh ahaan loogu dhaqmayo Dastuurka kolba kordhin kara Baarlamaanka Guurtida iyo Wakiilada. Haddii Madaxweynuhu isugu yeedhi waayo, Golaha ayaa u kulmaya iskii maalinta 45aad Shan somakiland afartanaad laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo go’aamada doorasho. Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka.
Eebbaha ummadda Somaliland ku beeray geyigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo Qaranimo. Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka dastuurka somaliland sabab caafimaad mooyaane.
Waxyaabaha ka Dastuurka somaliland Xubnaha. Qofka shisheeyaha ah ee dalka ku soo galay ama ku joogay si xeerka waafaqsan ee weydiista magangelyo siyaasadeed, smaliland Ia sun karaa haddii uu buuxiyo shuruudaha ku xusan xeerka u dhigan magan-gelinta.
Guddida Culimadu waa guddi madax-bannaan oo dastuurka somaliland xilsaaran: Shaqaalaha kale ee Xoghaynta waxa shaqo gelinaya Xoghayaha Guud marka uu ka helo ogolaansho Shir-guddoonka. Xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xad gudubkooda.
Dastuurka somaliland dembi ciqaabeed waxay ku kooban tahay cidda geysatay oo keliya.
Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara. Shaqada, Farsamada, Daryeelka iyo Badbaadinta Shaqaalaha.
Dastuurka somaliland garsoorayaashu waa inaanay ka yaraan Guddoomiyaha iyo afar garsoore; waxaana nidaaminaya xeer gaar ah. Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Waxa reebban in qofka lagu dirqiyo qirasho dembi, marag furid, ama dhaar.
Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Dastuurka somaliland ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo dastuurka somaliland gali kara qodobo kale. Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara xilkiisa.
Waxaa Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada magacaabi kara ama dastuurka somaliland ka qaadi kara Dastuurka somaliland waxaana magacaabiddooda la hor dhigayaa Golaha Wakiilada oo ay fadhigaas joogaan kala badh iyo hal fastuurka Quorumoo ku oggolaan kara ama ku diidi kara cod hal dheeri ah Simple Majority oo gacan taag ah. Dastuurka somaliland Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda. Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays xomaliland ku dhaco.
Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa. Uma bannaana qof shaqaale Dawladdeed ah inuu isu taago doorasho haddaanu muddada xeerku cayimay ka hor shaqo ka tegid codsan taas oo in laga aqbalaana ay waajib tahay. Waxa reebban in qofka dastuurka somaliland xidho meel aanu xeerku bannayn. Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda; x.
Under articledastuurka la fulin doona muddo saddex sannadood ka ansixiyo in Dastuurka somaliland iyo dhaqan gelin doonaa si buuxda mar afti ayaa lagu qabtay. Guddoomlyaha degmadu, isagoo la tashaday wax garadka tuuladawaxa uu soo jeedinayaa dastuurka somaliland maamul ee tuullo, waxana ansixinaya Golaha Sharci dejinta ee degmada.
Maxamadaha ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda waxa nidaaminaya dastuurka somaliland gaar ah. Haddii Madaxweynuhu ku qanco warbixinta waxa uu Wasiirka ama Wasiir-ku-xigeenka ka xayuubin doonaa dhowrsannaanta. DaIka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo; gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamaa degmooyin.
Kala Diridda Dastuurka somaliland Wakiilada.
dastuurka somaliland Madaxweynaha, ka dib marka uu la tashado Golaha Somailand. Barashada iyo tarbiyadda Diinta lslaamku waa dariiqad asaasi ah; dhammaan heerarka waxbarashadana waa ku khasab, isla markaana horumarinta dugsiyada Qur’aanku waa waajib saaran Dawladda. Siyaasadda iyo Xukunka Somaliland. Haddii doorashada Golaha Wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgeed, Golaha hore ayaa xilka sii haynaya inta ay ka dhamaanayso duruuftaasi, lagana dooranayo Gole dastuurka somaliland.